About Us - Yiwu yan Bei Glasswork Co., Ltd.
Glass Candle lwesiphathi
indebe Ice Cream
Borosilicate Glass High Product
Yiwu yan Bei Glasswork Co., Ltd.
Sizama ukugqwesa, ukuphucula kunye ezintsha rhoqo, lizibophelele nathi "umthengi trust" yaye "ukhetho lokuqala oomatshini izincedisi brand zobunjineli" abaxhobisi. Khetha thina, ukwabelana imeko win-win!
inkampani iimveliso zeglasi YIWU shuangbei yasekwa ngo-2006, kwaye iye ezizodwa kwiglasi mveliso, uyilo glass kunye processing yeglasi iminyaka elishumi. inkampani yethu kwelokuthi isigama kwimveliso inzululwazi, ulawulo olungqongqo kwaye ugcine innovating, kwiminyaka yakutshanje, kuye zikhuliswe waba ngomnye iinkampani best iglasi China. iimveliso Company nje kuphela ukufikelela lokwamkela iikhastoma Asia kunye nabathengi Australia, kodwa ukwakha intsebenziswano ixesha elide apho ezinye iinkampani eYurophu American. Ngenxa ishishini yokwanda kwiminyaka yakutshanje, inkampani yethu ekwakheni mveliso entsha e Shanxi kwaye Ibe Equipments yokuvelisa nokulungiswa phambili, nathi wamisa iqela kuyilo lobungcali ukwenza ezinye iinkonzo ezifana applique, nangokukrola, umbala ukutshiza, sandblasting, igolide ukuphucula ixabiso lemveliso abathengi ngayo, oku kubenza olunokhuphiswano emarikeni. iimveliso Inkampani ziquka lokwenziwa ezifana engenamqheba, iglasi yamanzi, ivazi, iglasi ipleyiti, iketile, nesiphatho sezibane, iwayini, njl, kwaye iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo zokwakha machine: indebe utywala, ikomityi amancinane, ikomityi yamanzi, ibhiya imagi, iketile, kunuka, njl
zonke iimveliso zethu yenkampani kufuneka sidlule SGS, FDA, BV zovavanyo LFGB, ngokupheleleyo nga ukuqinisekisa ukhuseleko nokuba sengqiqweni kwayo iyasetyenziswa. We thembisa; siza kusebenzisa umgangatho wokuqala-class, inkonzo ebalaseleyo, intsebenziswano esebenzayo, xa kutshintshiselwano ukholose yakho ukuthi ulakhele ikamva lethu eliqaqambileyo kunye. Inkampani iimveliso zeglasi Yiwu shuangbei yinkampani professional leyo ezikhethekileyo imveliso iimveliso zeglasi, sibe nenkqubo yolawulo lomgangatho zenzululwazi ngokupheleleyo. Inkampani iimveliso zeglasi Yiwu shuangbei ukuba igama elihle eTshayina, abahlobo efudumeleyo abamkelwa kuvela lonke ihlabathi kutyelela inkampani yethu nokwakha ushishino kunye nathi.
Inombolo 0579-85011919 fax:: Umnxeba 0579-89940449
Masiqalise Ukuthetha PROJECT yenu